QORAAL GAAR AH KU SOCOTO MAQAALKII ABUUKAR XAAJI. WAXAA QORAY Ali Faqay
November 9 2001 at 5:28 PM BAYDHABO PRESS
Walaal Abuukar waad salaamantahay,
Waxaan ku soo gudbinayaa qoraalkan oo jawaab celin u ah maqaalkaagi oo kowda bisha November 2001 ku soo baxay BaydhaboPress. Sida aad ogsoontahay in dhamaan dadka reer Baraawe ay yihiin dad walaalo ah oo ay kala marmin. Ummad walibana waxaa laga dhex helayaa dad fiican iyo kuwa xunba,waxaana loo bahanyahy kaagi xunka ah in aad waciyegelisd.
Taariikhda degmada Baraawe iyo Qabaailadda ku nool waa wax la wada ogsoonyahay. Matlan 800 sano ka hor ma jirin wax la yirahdo Digil ama BIIDA, xilii dhow oo laga joogo muddo 100 ilaa 200 sano ayaa magacyadaan soo ifa bahday oo ayna ku timid Isbaheeysti iyo Iskashaato loguna dan-lahaa arimo siyasadeed iyo tan bulshadeedba.
Walaal Abuukar: waxaan ku Ogeysinayaa in Taariikhdo marna ma gaboobdo beena lagama sheegi karo Taariikhda. Waxaa kale oo xusid mudan in qoralkaaga aad ku tilmaa-mtay Beelaha ASHARAAF,REER FAQI, HATIMI, ISKASH-ATADA BIIDA ay ahayeen dad DALK-MAREEN ah oo Baraawe la dejiyey wagaas. Taana waa arrin xaqiiqda iyo runta ka fog.
Ma ilowday Markii Sultanka DAFARAADI,marku Xamar u aadey oo halkaasi Culomaau'diintu Beesha Reer Faqi ka codsadeen TAKULEEN,dad ciidan iyo dad Culomo ah, codse-goodina loo aqbalay in la siiyo dadkaasi oo ay ahayeen dad ku abtirsado beesha Reer Faqi, qayb libaax ah ayaa ka khateen dagaalkii TUNI-AJOORAAN. Waxaadna ogaata in Beesha reer Faqi Dalmareen kuma ay soo degin degmada Baraawe. kuwa kalena asbabooyin iyo duruuf kale ayay ku sii dageen degmada Baraawe,sida faahfahinta diinta Islaamka iyo ganacsiga ka socday degmooyinka Xeebaha ah.
Waxaan xusid mudan leh in qabailadaas oo dhan ay ahayeen Qabaiilo jiri-jirtay sida ASHARAAF-REER FAQI-HATIMI-ISKASHATADA BIIDA. Waxaan iga su'aal ah maxaa aad ku diidantahay beelahaas, ileen waa walalaahage oo ay ku abtirsadaan qowmiyada reer Baraawe?
Ma makhashay in sannadkii 1800 bartamihiisi ay magaa-lada Baraawe ku caan baxday inay tahay Gole hidoo iyo dhaqanka Islaameed. Suldaanka la dhihi jirey Sayyed Saciid wuxuu marti qaad u fidiyey caalimka arrimaha diinta reer Baraawe, Sheikh Mohieddin Bin Faqi Al-Qahtaani-inuu si joogto ah u dejiyo Zanzibar, si uu u qabto jagada Qaaliga Dalkaas. Sidaas darteed waxaan ku sheegayaa in Beelahaas aysan ahayn magacyo oo imminka la abuuroyo waa beelo jiri-jirtay oo magac iyo Taariikh fac weyn lahayeen.
Xamariyiinta ama Gibilcadka Baraawe ku nool haddi aad ku tilmaamtey in ahayeen dad dal-mareen., Waxaa su'aal iga ah Yay ahayeen sadexda Beelo Goob-weyn iyo labadi Beelo ka timid xeebaha Kuyama iyo Chula oo markii liskugu daro ay wada noqdeen shan Beelood oo iyaguna asalahaan ka wada yimideen Ethoipia iyo Kenya. Markii ay Isbaheeysteen oo la magac baxeebn "BEELAHA SHANGMAAS". Ma waxay ahayeen dad Dal-Mareen oo ay uga sii horeyeen Gibilcadka mise waxay ahayeen (NATIVE OR ABORIGINAL).
War iyo dhamaadkiis, haddi taasu taariikhdu ahayd, Mahaa haddaba maanta dadka reer Baraawe dhamaantood lagudboon,ama xil ka saraan inay ka kor maraan hunnu hunuuda, kala qaybsanaanta iyo fitnada dhex taal, ahna mid cadowgood dhex abuuray? Anigu waxaa ilaa tahay dhibaatooyinkaas oo dhan waxaan ku daween karna midnimo iyo is jaceel oo aan kaga hortagi karno cadowga. Tana waxaa la heli kara markii aan ka weynaano Tuni iyo Gibilcaad ama Asal iyo dalmareen.
Walaal abuukar Xaaji, waan kugu racsanahay Xikmadaade ah "MEEL HOO U BAAHAN HADAL WAX KAMA TARO" Waxaan ku leeyahay waqti lisqayb-qaybsado lama joogo ee midnimada iyo horumarka reer Baraawe ha laga shaqeeyo.
Hana waarto Midnimada dhabta ee Ummadda Reer Baraawe.
W.Q. Ali Faqay